Frank Lampard oo barbaro ku bilowday waayihiisa tababarenimo ee kooxda Chelsea, xilli Blues ay ku hor kuftay koox ka dhisan Ireland… + SAWIRRO – Gool FM
(Dublin) 10 Luulyo 2019. Macallin Frank Lampard ayaa barbaro ku bilowday waayihiisa tababarennimo ee kooxda Chelsea kaddib markii Blues ay ku hor kuftay kooxda ka dhisan Waddanka Ireland ee Bohemians.
Kulankan oo ka dhacay Magaalada Dublin ee dalka Ireland gaar ahaan garoonka Dalymount Park ayaa ku soo dhammaaday barbaro 1-1.
Kaddib markii maalmo yar ka hor loo magacaabay Lampard ayaa kulankiisii ugu horreeyey isagoo tababare ah hoggaamiyey kooxda uu halyeyga ku soo noqday ee Chelsea, laakiin nasiib-darro waxa ay ka adkaan waayeen naadiga Bohemians.
Markii ay ciyaarto mareysay kaliya 8’daqiiqo bilowgii macallin Frank Lampard kooxda uu tababaraha u yahay ee Chelsea ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaa goolka daah furka u dhaliyey Michy Batshuayi, kaasoo noqday xiddigii ugu horreeyey ee gooldhalinta Blues ku soo dhoweeyey macallin Lampard.
Yeelkeede, dhammaadkii ciyaarta kooxda Bohemians ayaa goolka barbaraha la timid 89’daqiiqo, waxanaa Lampard guusha uu gacanta ku dhigi lahaa ka joojiyay Molley oo goolkan ka dhaliyay Chelsea.
Taasi waxa ay ka yeeshay in macallinka cusub ee Chelsea Frank Lampard uu barbaro ku bilowdo waayihiisa ciyaareed ee Blues, maadaama kulanku ku soo dhammaaday gar isku mid ah 1-1.
Xulka Nigeria oo iska xaadiriyey afar dhammaadka Koobka qarammada Afrika 2019 kaddib markii ay garaaceen South Africa … + SAWIRRO